October 2019 – Trend.com.mm
သင်က အရင်ကတည်းက ၀ိတ်မြန်မြန်တက်လေ့ရှိသူမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းဝိတ်ကပုံမှန်ပဲရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဝိတ်က မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတက်လာတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ *ညဘက်တွေနောက်ကျမှအိပ်ခြင်း တကယ်လို့ သင်က အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနောက်ကျမှလည်းအိပ်ဖြစ်တယ်။အချိန်မှန်မအိပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ရုတ်တရက်ကြီးဝိတ်တက်လာတာဟာ ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်…
ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အတော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Zombie ဇာတ်လမ်းတွဲ “Kingdom”ဟာ မကြာခင်ရှေ့မှောက်အတွင်းပရိသတ်တွေရှေ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတော့မယ်။ Netflix ရဲ့တရားဝင်အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကနေ ၂၀၂၀ မတ်လမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on မကြာခင်ကြည့်ရှုခံစားရတော့မယ့် “Kingdom” Season 2
Ji Soo ကိုတော့ ဒရာမာဇာတ်ကားသစ်လေးမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်နေ့မှာ Ji Soo » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, MoviesLeaveaComment on Webtoon ကို အခြေခံပြီး ပြန်လည်ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်သစ်မှာ မြင်တွေ့ရမယ့် Ji Soo
လူတိုင်းကို မိမိစိတ်နဲ့ နှိုင်းလို့မရတာ တကယ်အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက် အသေးမွှားလေးကိစ္စလေးမို့လို့ အလိုက်တသိလုပ်ပေးလိုက်ပေမယ့် လုပ်ပေးနေမှန်းသိရင် ရောင့်တက်လာကြပါတယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on သင့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းစာမှုတွေက တစ်ခါတစ်လေ အခြားလူတွေအတွက် အသုံးချစရာဖြစ် သွားတတ်တာ သိပါသလား
Essential Oil ဆိုတာ လာဗင်ဒါပန်းအဆီ၊သံပုရာအဆီ၊ငရုတ်ကောင်းဆီ၊လေးညှင်းပွင့်အဆီစသဖြင့် အပင်တွေကနေထုတ်ထားတဲ့အဆီတစ်မျိုးမျိုးကိုပြောတာပါ။မွှေးပျံ့တဲ့ရနံ့တွေ၊စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတဲ့ရနံ့တွေဆိုပြီး ရနံ့တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီ Essential oil တွေကို ဘာလို့သုံးပေးသင့်တာလဲ? » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on Essential Oil တွေကို ဘာလို့သုံးပေးသင့်တာလဲ?
Posted on October 30, 2019 October 30, 2019 by Wint
HBO က GOTရဲ့prequel series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘House of The Dragon’ ကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Movies, NewsLeaveaComment on GOT ရဲ့prequel အဖြစ် ‘House of The Dragon’ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ HBO
ဘ၀မှာအောင်မြင်မှုရဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရပါတယ်။ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာသလို တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်းလွဲချော်တာလေးတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အထောက်အကူပြုနေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ မကြာခဏခရီးထွက်ခြင်းပါပဲ။ ခရီးထွက်တာဟာ ဘ၀မှာအောင်မြင်မှုတွေပိုပြီးရရှိစေတယ်လို့လေ့လာချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘာလို့များလဲ?? *ကိုယ်မကြုံဖူးတဲ့အသစ်အဆန်းတွေကြုံတွေ့ရတယ် နေ့တိုင်းမြင်နေကျ၊ဖြေရှင်းနေကျမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေ၊အကြောင်းအရာတွေကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on မကြာခဏခရီးထွက်သူတွေဟာ ဘ၀မှာပိုပြီးအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်
သြော်.. ဘယ်သူမှတော့ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ စားလိုက် ၊ အိပ်လိုက် ၊ အချစ်ခံလိုက်နဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on တစ်ခါတစ်လေ ကြောင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိကြဖူးလား
Posted on October 30, 2019 October 30, 2019 by Noel
“Love Alarm” Season2ထွက်လာဖို့ မျှော်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိလား?ယူတို့မျှော်နေတဲ့အတိုင်း တကယ်ကြီးဖြစ်လာပါပြီနော်။ နာမည်ကျော် Webtoon တစ်ခုကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားသလို “Love Alarm”Season2ထွက်ရှိလာမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့